Seychelles fizahan-tany fizahantany mizaha fizarana fitsangantsanganana sinoa
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Seychelles fizahan-tany fizahantany mizaha fizarana fitsangantsanganana sinoa
Seychelles dia niarahaba ny mpitsidika sinoa 40 tao Costa Victoria ny talata 13 novambra lasa teo, ny mpandeha voalohany avy amin'ny tsena aziatika izay nanao ny famandrihany tamin'ny alàlan'ny Ucruising niaraka tamin'ny fanohanan'ny biraon'ny Seychelles Tourism Board (STB) any Shina.
Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Ucruising sy ny birao fizahantany dia ao anatin'ny paikadin'ny STB hidirana amin'ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana sinoa.
Vokatr'ity fandraisana andraikitra ity dia mpandeha sambo 350 mahery avy any China no antenaina ho tonga ao Seychelles mandritra ny vanim-potoanan'ny sambo fitaterana an-tsambo 2018/2019, izay nosokafana tamin'ny 10 Oktobra tamin'ity taona ity.
Ny talen'ny varotra STB ho an'ny Sina & Japon, Jean-Luc Lai-Lam dia nanambara fa stratejika ny fiaraha-miasa ho amin'ny toerana haleha.
Ny foiben-toerany any Guangzhou, Sina, Ucruising dia masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana fonosana fitsangantsanganana rehetra ao anaty iray. Manana birao any Hong Kong, Shanghai, Canada, America ary Australia ny orinasa, izay manokatra varavarana hafa ho an'i Seychelles.
“Ity fiaraha-miasa amin'ny Ucruising sy STB ity dia manokatra ny nosintsika amin'ny tsena sinoa. Miasa am-pahavitrihana izahay hampitombo ny isan'ny mpitsidika amin'ity vanim-potoana ity », hoy Andriamatoa Jean-Luc Lai-Lam. Ny orinasan-tsambo fiambenana premium dia mivarotra zotram-pitaterana an-dranomasina any ivelany any Sina. Miara-miasa amin'ireo marika fitsangantsanganana lehibe toa an'i Costa, Royal Caribbean, Princess Cruises ary Silver Sea ankoatry ny hafa, kendren'ny orinasa ny tsena sinoa sy sinoa monina any ivelany.
Amin'ny diany miverina any Costa Victoria amin'ny 27 Novambra, handray ny vondrona sinoa lehibe kokoa ny vondronosy 115-nosy - olona 250 ny totaliny. Costa Victoria, tompon'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo italianina Costa Crosiere, dia manana fahaizana mitondra mpandeha 2,394 farafaharatsiny.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny sambo fitaterana an-tsambo 2018/2019, Seychelles dia hanohy handray ireo mpitsidika izay tia karazana dia lavitra. Maro amin'ireo sambo izay hitondra ny mpitsidika ireo nosy seychelles hafahafa dia mitsangatsangana any amin'ny Ranomasimbe Indianina.